LEGO Bygge Hygge ရရှိရေးအတွက် Hygge ကျွမ်းကျင်သူ၏ထိပ်တန်းအကြံဥာဏ်များ
LEGO Bygge Hygge ရရှိရန်အတွက် Hygge ကျွမ်းကျင်သူ၏ထိပ်ဆုံးအချက် ၁၀ ချက်
28 / 01 / 2021 28 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 657 Views စာ0မှတ်ချက် Bygge Hygge ပါ, ဒိန္းမတ္, Hygge, Lego, Lego Bygge Hygge, Wikik Meik, အဆိုပါ LEGO Group
ဒိန်းမတ်စာရေးဆရာနှင့် Hygge ကျွမ်းကျင်သူ Meik Wiking သည်အောင်မြင်မှုအတွက်သူ၏ထိပ်ဆုံးအကြံပြုချက် (၁၀) ခုကိုမျှဝေခဲ့သည် Lego Bygge Hygge ။
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်၎င်း၏ 'ပျူငှါနွေးထွေးသောအဆောက်အ ဦ' 'မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ခဲ့သည် ယခုလအစောပိုင်းကဆောင်းရာသီတွင်ပရိသတ်များသည်အုတ်များကိုထုတ်ပစ်ရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဒိန်းမတ်၏ hygge (ဟူးဂူဟုအသံထွက်) နှင့်မရင်းနှီးပါက၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာခံစားမှုဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအသစ်စတင်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်စာရေးဆရာမိမိဝီကင်းသည်ယခုအခါ hygge အခြေအနေရရှိရေးအတွက်သူ၏ထိပ်တန်းအကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေလိုက်သည်။ “ ငါတို့အားလုံးဟာလက်ရှိအိမ်တွင်းမှာအချိန်ဖြုန်းနေကြတာနဲ့အမျှမိသားစုတွေကိုဒီဆောင်းတွင်းမှာ Bygge Hygge ကိုဘယ်လိုပျော်မွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကိုအကြံဥာဏ်တွေပေးချင်ခဲ့တယ်။ Brick Fanatics.
ကျွန်ုပ်တို့အများစု Meik ၏အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်မည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တွင် Lego ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကလေးဘဝတွင်အမြစ်တွယ်သည်။ “ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစကားတစ်ခုကတော့ 'ငါတို့အိုတာကြောင့်ကစားတာကိုမရပ်ဘူး၊ Lego ခင်ဗျားဘယ်အသက်ဘယ်အရွယ်ပဲရှိပါစေတီထွင်မှုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။
ဒီစကန်ဒီနေးဗီးယန်းအယူအဆကိုသင်စိတ်ရှုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းရာသီမှာ Meik ကသူ့ကိုထိပ်ဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်။
10 - နှေးကွေးခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့
သူကရှင်းပြသည်မှာ Hygge သည်အနားယူရန်နှင့်အရာများကိုနှေးကွေးစေရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်søndagshygge - Sunday hygge သည်လက်ဖက်ရည်၊ စာအုပ်များ၊ တေးသီချင်းများ၊ စောင်များနှင့်အရာဝတ္ထုများရူးသွပ်သွားပါကရံဖန်ရံခါလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်နှေးကွေးသောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်များ၏နှေးကွေးလက်ခံပါ။ အိမ်တွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုဝေးလံသောကမ်းခြေများထက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ”
“ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသောကလေးတွေကဒီကိစ္စဟာသူတို့မိဘတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်လို့ပြောကြတယ် Lego ကောင်းစွာသတင်းပို့ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ဒီတစ်ခုကငါတို့အများစုအတွက်တော်တော်လေးသိသာထင်ရှားတယ်။ ငါတို့တွေစုပေါင်းပြီးတည်ဆောက်တဲ့လူကြီးတွေပါ Lego ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အုတ်။
လက်ရှိ Zoom ဆုံတွေ့မှုများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအလုပ်များတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများအတွက်သင်တတ်နိုင်သမျှအချိန်ပေးပါ။ "ရုပ်မြင်သံကြားကိုဘေးချင်းယှဉ်။ ထိုင်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှအမှန်တကယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်ဖို့လိုသည်" သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရမည့်မိသားစုလုပ်ဆောင်မှုများကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေရင်ဒါမှမဟုတ်သင်ကလူမှုရေးအရအထီးကျန်နေတယ်ဆိုရင် FaceTime နဲ့ Skype တို့လိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာတွေဟာအစားထိုးကောင်းတစ်ခုပဲ။ ”
“ ချက်ပြုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ကိုင်စည်းမျဉ်းက - ဟင်းချက်တာကြာကြာကြာလေလေ၊ "နှေးနှေးကင်သို့မဟုတ်စွပ်ပြုတ်နှင့်ချဉ်ပေါင်စဉ်းစားပါ။ Hygge သည်ခရီးကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်။ စိန့်art မွန်းလွဲပိုင်းလယ်တွင်ချက်ပြုတ်ပါ။ ညစာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးခင်အနားယူရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိသည်။
6 - ပစ္စုပ္ပန် Be
သင်တစ် ဦး hygge အခြေအနေကိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်လိုပါကသင်ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝကျူးလွန်ရန်လိုအပ်သည်။ "Hygge ဟာလက်ရှိအခြေအနေကိုဆိုလိုတာပါ။ တခြားလူတွေကိုမင်းကတခြားနေရာကိုတကယ်လို့ရောက်နေတယ်လို့မခံစားစေချင်ဘူး" ဟု Meik ကရှင်းပြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝမြှုပ်နှံနိုင်ရန်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုတစ်ဖက်ဖက်ထားရန်ကြိုးစားပါ။
“ ဒိန်းမတ်လူမျိုးများအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံး hygge ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဆောင်းရာသီတွင် ပို၍ လိုအပ်သည်။ ဆောင်းရာသီအမှောင်ကျလာသည့်အခါ၎င်းသည်နေအိမ်များနှင့်နှစ်သိမ့်မှုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်မှာအေးစက်နေတဲ့၊ မုန်တိုင်းထန်ပြီးအမှောင်ကျတဲ့အခါမှာ hygge အတွက်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ ”
"Hygge ကိုအကောင်းဆုံးညလို့သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်" ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေများမှာမျှတမှုရှိဖို့ငါတို့အားလုံးလိုချင်တာကတူတယ်။ “ ဒီဟင်းကိုနာရီအနည်းငယ်မျှတည်ထားပါ၊ စာအုပ်အချို့ထုတ်ပေးပါ Lego အုတ်များနှင့်မိသားစုတည်ဆောက်ခြင်းအချိန်အချို့ကိုပျော်မွေ့သည်။ "
"Hygge ဆိုတာယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ" ဟု Meik က Monopoly သို့မဟုတ် Catan ကစားခြင်းကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ ငါတို့အားလုံးအတူတူပဲ။ အတူတူအလုပ်လုပ်ကြရင်ငါတို့အားလုံးပိုကောင်းလာမယ်။ ယုံကြည်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
hygge ၏အယူအဆသည်သိမ်မွေ့လွန်းသည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "ပထမ ဦး ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ hygge ဆိုတာလေထုတစ်ခုပါ။ "Hygge သည်အရည်အသွေးရှိသောအချိန်များကိုသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည် friends မိသားစုများ၊ ငါတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုလျှော့ချပြီးငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ပါ။ ”
“ Hygge ဟာငါတို့မှာများများစားစားရှိတာတွေကိုနေ့စဉ်လုပ်ဖို့ပဲ။ “ အပြင်ဘက်မှာတောက်ပတဲ့ကောင်းကင်ပြာကိုတွေ့လား၊ နံနက်ခင်းကော်ဖီလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖာပေါ်မှာနွေးထွေးပျူငှာခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်လေးကိုပျော်ရွှင်ဖို့အချိန်ယူပါ။ ” အခြေခံအားဖြင့် - နှင်းဆီပန်းများကိုရပ်ပြီးအနံ့ခံရန်သတိရပါ။
အဆိုပါ Lego မြှင့်တင်ရန်အုပ်စုသည်အခမဲ့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် Lego သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ဟောက်စေသောအုတ်ခဲများပါသော Bygge Hygge လှုပ်ရှားမှု ဒီမှာ.
← Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်မှဒီဇိုင်နာသည် LEGO တွင် 10K သို့ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့သည် Ideas Claus Toys နှင့်အတူ
LEGO NINJAGO မှအတွေးအမြင်မှခေါင်းစဉ်အထိ - ဘုံများကို ဖြတ်၍ အမဲလိုက်သည် →